China Sealing Liner Induction Heat Induction Seal Liner Miaraka amin'ny orinasa "Structure" sy mpamatsy | 品牌 名 / 公司 名
Tapa-kofehy fampidirana hafanana roa misy rafitra iray
Akora matevina: Fitaovana miandalana + Wax + Aluminium Foil + Film Plastika + Horonantsary famehezana
Fitaovana fanampiana: tabilao pulp na polyethylene (EPE) nitarina
Hatezerana mahazatra: 0.2-1.7mm
Ny foil aluminium dia ny sosona voalohany amin'ny sosona foil aluminium.
Ny sosona aluminium dia voaisy tombo-kase amin'ny molotry ny kaontenera.
Ny sosona faharoa (baoritra misy endrika) dia tavela ao anaty satroka.
Azo ampiasaina amin'ny tavoahangy vita amin'ny plastika PET, PP, PS, PE, tavoahangy plastika avo sakana
1. Mora be ny manokatra
2. Tombo-kase amin'ny fihavaozana
Antony misy fiantraikany amin'ny famehezana
Ny sakan'ny fifandraisana amin'ny haben'ny famehezana: ny lehibe kokoa amin'ny sakan'ny fifandraisana eo amin'ny sehatry ny famehezana sy ny gasket na ny fonosana, ny lava kokoa amin'ny lalan'ny famoahana rano ary ny fihoaran'ny fanoherana mahery vaika izay mahasoa amin'ny famehezana. Saingy, amin'ny herin'ny famatrarana mitovy, ny lehibe kokoa amin'ny sakan'ny fifandraisana, ny kely kokoa amin'ny tsindry manokana. Noho izany, ny sakan'ny fifandraisana mifanentana dia tokony ho hita arakaraka ny fitaovan'ny tombo-kase.
Toetran-tsiranoka: ny viscosity an'ny ranon-javatra dia misy fiatraikany lehibe amin'ny tombo-kase famehezana ny fonosana sy ny gasket. Ny tsiranoka misy viscosity avo lenta dia mora voaisy tombo-kase noho ny tsy fahampian'ny tsiranoka. Ny viscosity du caire dia avo lavitra noho ny an'ny gazy, ka mora kokoa ny mifatotra noho ny gazy. Mora kokoa ny manisy tombo-kase mahavoa ny tombo-kase noho ny etona mafana be satria hanondraka sy hampiakatra ny rano mitete izy io ary hanakana ny fantson-drano manitsaka eo anelanelan'ny tampon'ny famehezana. Arakaraka ny haben'ny molekiola ao anaty tsiranoka no mora kokoa amin'ny fanakanana ny elanelana famehezana ety, ka mora ny manisy tombo-kase. Ny fahamendrehan'ny ranoka amin'ny fitaovana famehezana dia misy fiantraikany ihany koa amin'ny famehezana. Ny ranon-javatra mora mandona dia mora mivoaka noho ny fiasan'ny kapila bitika ao anaty kitapo sy ny fonosana.
Previous: Taratasy famehezana induction hafanana iray miaraka amin'ny sarimihetsika PE fotsy
Manaraka: Tapa-kofehy fampidirana hafanana roa miaraka amin'ny sosona taratasy
Tapakila fanindronana hafanana indostrialy miaraka amin'ny atiny ...